RASMI: Portugal Iyo Italy Oo Midkood Ka Hadhayo Koobka Adduunka & Isku Aadka Isreeb-reebka Oo La Sameeyey - Laacib
HomeCiyaaro CaalamiRASMI: Portugal Iyo Italy Oo Midkood Ka Hadhayo Koobka Adduunka & Isku Aadka Isreeb-reebka Oo La Sameeyey
Xulalka awoodda badan ee Portugal iyo Talyaaniga ayuu midkood ka maqnaan doonaa Koobka Adduunka 2022 ee lagu qaban doono waddanka Qatar, kaddib markii ay labadan dal isku beegmeen isku-aadka isreeb-reebka tartankan ugu qiimaha badan dunida.
Waddamadii kaalmaha labaad ka galay Group-yada isreeb-reebka Koobka Adduunka ee qaaradda Yurub ayaa hadda la sameeyey, waxaanay taageereyaashu haddaba sii ogaanayaan in Koobka Adduunka ay ka maqnaan doonaan Cristiano Ronaldo, Bruno Ferdinandes iyo Joao Cancelo ama Jorginho, Donnarumma iyo Federico Chiesa.
Qaaradda Yurub ayaa waxay Koobka Adduunka ku leedahay 13 waddan, kuwaas oo 10 ka mid ah ay kusoo baxeen hormooyinkii oo ay mar horeba boosaskooda xaqiijisteen, hase yeeshee 12 kale ayaa ku dagaallami doona saddexda boos ee soo hadhay ee buuxinaya tirada dalalka Yurub ee Koobka Adduunka.
Toban waddan oo kaalmaha labaad kasoo galay Group-yadooda ayaa lagu daray laba kale oo ahaa kuwii ugu fiicnaa ee kaalmaha saddexaad ku dhamaystay.
Saddex hormo oo afar dal ah ayaa loo kala jabiyey 12ka waddan ee isreeb-reebka loo sameeyey, waxaana meel kasta laga doonayaa inuu hal waddan oo kali ahi kasoo gudbo.
Group C ayay ku kulmeen Portugal, Italy, Turkey iyo North Macedonia, waxaana afartoodan laga doonayaa inuu mid kali ahi kasoo baxa.
Talyaaniga oo ku guuleystay Euro 2020 ayaa ka maqnaa Koobkii Adduunka ee 2018, waxaana kulanka hore uu la ciyaari doonaa North Macedonia, haddii uu soo guuleystana waxay is heli doonaan Portugal iyo Turkey oo wada ciyaaraya midkooda soo badiya.
Úpdy Khàdir says:
Portugal wey kaso bixi donta
Azzur way soo bixi donta insha Allah
Turkiga ayaa sooo baxaya kanaxow nafta waa 🤪🤪🤣
Portugal wey hartay asxpta
Portugal ha haraan doofaaraha, in kastoo game adag sugaya hadeyba isku soo baxaan labadooda, waxaan u soo gudbi doona Italy saan is Lee yahay Zuuri ciyaar ciyaar ma ahan nasiibkkid Portugal 🤣